सफ्टवेयर मार्फत संकलित वासका तथ्याङ्क यसरी हेर्नुहोस् (भिडियो) - WASHKhabar
५ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०७:५५ 526 पटक हेरिएको
काठमाडौ : सरकारले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी तथ्याङ्क सफ्टवेयर मार्फत संकलन गर्न थालेको छ । हालसम्म देशभरिका १३९ वटा नगरपालिकाका ६ हजार ८० वटा खानेपानी आयोजनाहरुको तथ्याङ्क संकलन भईसकेको छ । संकलित तथ्याङ्कमा सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको संरचनाहरुको अवस्था तथा ती खानेपानी आयोजनाले पुर्‍याएको सेवा र हरेक घरको धाराको अवस्था समेटिएको फोटो समेत संलग्न राखिएको छ ।
तपाई तथ्याङ्क संकलन भईसकेको कुन प्रदेश, जिल्ला वा नगरपालिका भित्रको कुन खानेपानी आयोजनाको बिषयमा हेर्न चाहनुहुन्छ ? सोही आयोजनाको बारेमा विस्तृतमा हेर्न सक्नुहुन्छ । तथ्याङ्कमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बर, लेखापरीक्षण भईरहेको छ वा छैन ? लेखापरीक्षण विवरणका साथै साधारण सभाको निर्णय समेत उल्लेख गरिएको छ । यस्तै खानेपानीको नियमित मर्मत सम्भारका लागि ग्रामीण मर्मत सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ वा छैन ? छ भने कति तलब उपलब्ध गराईएको छ समेतका तथ्याङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ ।
उक्त तथ्याङकहरु www.nwash.mowss.gov.np मा लग इन गरेर हेर्नसक्नुहुन्छ । यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी हेर्न तलको भिडियो क्लिक गर्नुहोला ।